ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Sunday, January 15, 2012
post လေးကိုဖတ်ပြီး တစ်ခုခုကို ခံစားမိတယ်။ အထီးကျန်တဲ့ ခံစားမှု နဲ့ယုံကြည်ချက် လို့ ထင်မိပါတယ်။ "www.nayphonelatt.net ဒီလိုဆိုရင် Access has been denied ဒါမျိုးမပေါ်တော့ဘူးဗျ" ...လေးကို ဖတ်မိတော့ ပျော်မိ တယ်။ ဒီထက် ပိုပြီး စာတွေ အများကြီးကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးနိုင်ပါစေရှင်။
အဲဒီလိုနေရာမျိုးမှာ တယောက်ထဲ အထီးကျန်နေရာတာနဲ့စာရင် လက်ကလေးတဖက်ကို မြင်ရတာနဲ့တင် တယောက်ယောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အသိကြောင့် စိတ်သက်သာရာ ရစေခဲ့တာနော် ... ။
ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းပေမဲ့ နေဘုန်းလတ် စာတွေကို အများကြီး ဖတ်ချင်သေးတယ်။
ဖတ်လိုက်တာနဲ့ စာဖတ်သူ့ရဲ့ မျက်လုံးထဲပေါ်လွင်စေပါတယ်..
အဲဒီလက်ကလေးနဲ့ အရိပ်ကလေးဟာ မင်းအတွက် အားအင်တွေ ဘယ်လောက် ဖြစ်စေခဲ့မလဲဆိုတာ ငါ မှန်းကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ဆက်ရေးကွာ။
ဆရာငြိမ်းကျှောပြောတဲ့ ချဉ်ဖတ်စိန်ထားတဲ့စာပေတွေ လာတော့မယ်ထင်တယ်
ရင်ထဲကို ထိတယ်၊ ရှတယ်၊ ဖတ်နေရင်းနဲ့ကို ကျနော် ကြက်သီးထနေရတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ကိုကျော် ... အားအင်တွေ ပေးနေတဲ့ အဲဒီလက်ကလေးတဖက်နဲ့ ပုံရိပ်ဟာ ပြောပြမနိုင်တဲ့ အနှိုင်းမဲ့အင်အားလားလို့တောင် ဆိုလို့ရတယ်။ ဆက်ရေးပါ၊ ဖြည်းဖြည်းခြင်းရေးပါ ကိုကျော် ... ကျနော်တို့ အမြဲအားပေးနေပါတယ်။
ဘဝတက္ကသိုလ်ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်အကို... ကောင်းသောနေ့ရက်လေး ဖြစ်ပါစေရှင်..
May Oo Moe said...
အကျဉ်းထောင်နေ့ရက်တွေကို ဘယ်လို စိတ်.. ဘယ်လို ရင်ဆိုင်မှုမျိုးနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့တယ်ဆိုတာလေး ခံစားလို့ ရခဲ့ရင်.. ချရေးချင်စိတ် ရှိရင်.. မျှဝေပါဦးနော်..။ လူငယ်တယောက်.. စာရေးဆရာတယောက်... ပညာတတ်တယောက်.. မတရားခံရတဲ့ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ဆိုတာကို ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသလဲဆိုတာ မှတ်တမ်းလည်း ဖြစ်စေချင်လို့ပါ။
:)တော်တော် သရုပ်ပီပြင်တယ်။ ဆက်ရေးပါဦးနော်။ အားပေးနေပါတယ်။
ဘ၀နဲ့ရင်းပြီး ရလာခဲ့တဲ့ အတွေ့ကြုံတွေကို မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးပါအကို။ ခံစားချက်တွေရှိလာတိုင်း ရင်ဖွင့်ပေးတဲ့ အကို့ရဲ့စာတွေကို အားပေးနေပါတယ်။ အကို ပျော်ရွှင်ပါစေ..
(ကျနော်ဆိုက်မှာ လင့်ချိတ်ခွင့်ြ့ပုပါ အကို)
အကျဉ်းစံ နေ့ရက်များ အကြောင်းကို ဖတ်ပြီးတော့ ခင်ဗျားခံစားရတာကို နားလည်မိပါတယ်။ ဆက်ပြီးတော့ ရေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
ရင်ထဲမကောင်းပေမယ့် အစ်ကို့ စာတွေဖတ်ချင်သေးတယ်... ဆက်ရေးပါ....
အီးမေးလ်ထဲ subscribe လုပ်ထားတာကိုဖတ်ပြီးမှ ကောမန့်ပေးချင်လို့ ဒီလာပြီး ထပ်ဖတ်ဖြစ်တယ်။
ကိုယ်တိုင်သံတံခါးတစ်ထပ်၊ သစ်သားတံခါးတစ်ထပ်နောက်က ချောင်းကြည့်ရသလိုမျိုး ခံစားရတယ်။
အကျဉ်းစံလို့ သုံးတာကို ကြိုက်တာ..။
ရေးထားတဲ့ပို့စ်ကလည်းကောင်းသလို ကွန်မန့်တွေကလည်း ကောင်းပါပေတယ်။
လက်လေးတဖက်က တယောက်တည်း မဟုတ်ဘူး..အဖော်တွေ ရှိတာ သိရတော့ အားတက်တဲ့အကြောင်း ဖတ်ရတော့ စိတ်ထဲနင့်သွားတာပဲ..ဆက်ရန် မျှော်နေတယ်
Welcome back bro, i'd waited so long to read suchapost :)
ခါးသီးမူတွေ ဝေမျှ ခံစားကြမယ်အကို ..
Welcome back Ko Nay Phone Latt!
ပိုစ့်လေး ဖတ်ရတာ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေသလို ခံစားမိပြီး မျက်ရည်တောင် ၀ဲမိတယ်.... ဆက်ရေးပါဦး အစ်ကိုတော်
ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာတဲ့ အတွက် အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ ...
တစ်ချိန်တုန်းက ကြားဘူးခဲ့တာက ထောင်ဆိုတာ လူဆိုးတွေကိုထားတဲ့နေရာတဲ့။ တစ်ကယ်တော့ ထောင်တွေထဲမှာ ပညာရှင်တွေ မျိုးချစ်ပုဂိုလ်တွေ နိုင်ငံသားကောင်းတွေ ဘယ်လောက်တောင်ရှိခဲ့ ရှိနေခဲ့လဲ။ ညီလေးခနလိုက်ခဲ့ပါဆိုပီး ဘ၀ဆုံးသွားတဲ့သူတွေဘယ်လောက်တောင်များခဲ့ပြီလဲ၊ အစ်ကို့ရဲ့ထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံ လေးတွေကို ဆက်ပြီးဖတ်ချင်ပါသေးတယ်။
ကိုနေဘုန်းလတ်ရေ ... ၀မ်းလည်း သာတယ် ဂုဏ်လည်း ယူပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော့်ကို မှတ်မိမယ် ထင်ပါတယ်။
၀မ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ် ကိုနေဘုန်းလတ်ရေ... ကျွန်တော့်ကို မှတ်မိမယ် ထင်ပါတယ်။
စိတ်ထဲမှာ စို့စို့နစ်နစ်ခံစားရတယ်... အလုပ်မှာဖတ်ရင်း မျက်ရည်ကျမိလို့ boss မမြင်အောင် အမြန်သုတ်လိုက်ရတယ်...
ဒါတွေဟာ ရုပ်ရှင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပင်မဲ့ မျက်လုံးထဲမှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရသလိုပဲ... ဇာတ်ကောင်တွေကို သရုပ်ဖော်နေမိတယ်...
နောက်ထပ်ဆက်ရေးပါအုံး... ဗဟုသုတလဲရတယ်... ရသလဲမြောက်တယ်...
တကယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ နံရံထဲက လက်တစ်ဖက်နဲ့ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ အရိပ်လေးကလဲ စိတ်ဓာတ်အင်အားကိုဖြစ်စေတယ်...
ရနေတဲ့အချိန်မှာ တန်ဖိုးမထားမိတဲ့အရာတွေအားလုံးကို ဂရုတစိုက်တန်ဖိုးထားတတ်ရင် နေပျော်ပါတယ်...
ဒီစာကိုဖတ်လို့ရတဲ့ ရသတွေနဲ့ မှတ်ချက်တွေကရတဲ့ ရသတွေကို စုပြီးဖတ်လိုက်ရတော့ ပိုလို့တောင် ဝမ်းနည်းမိတယ်....နောက်ထပ်တစ်ခါ မျက်ရည်ကျရပြန်ပါပြီ။
စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်းရေးတွေလုပ်တဲ့ အခါ ဘယ်လို အစ်ကိုရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကို မြင့်တင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ စိတ်ပိုင်းကိုအဓိက ထားပြီးတော့ ရေးပေးစေချင်ပါတယ်
Teen Magazine ရဲ့စာပေဆွေးနွေးပွဲမှာ ပြောဖြစ်ခဲ့တာေ...